ပူတင်နှင့်ဆွေးနွေးပွဲသည် ကောင်းမွန်ပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိကြောင်း အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား - Xinhua News Agency
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် (Vladimir Putin က ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၅ ရက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ပြင်ပ၌ ပြုလုပ်သော လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင် သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-- Sputnik/Handout via Xinhua)
ဂျေရုဆလင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နက်ဖ်တာလီဘန်းနက် (Naftali Bennett) က Sochi မြို့၌ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် (Vladimir Putin) နှင့် ၅နာရီကြာဆွေးနွေးမှုသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် လေးနက်မှုရှိကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘန်းနက်က ၎င်း၏ အပတ်စဉ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး၌ အစ္စရေးနှင့် ရုရှားဆက်ဆံရေးသည်လွန်စွာကောင်းကြောင်း၊ ထပ်ပြီးပိုကောင်းလာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ရုရှားစကားပြော လူဦးရေ ခန့်မှန်းခြေတစ်သန်းခန့် ရှိနေသောကြောင့် စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အလားအလာသည်အဆုံးအဆမဲ့ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကောင်းမွန်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေရခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး သမ္မတပူတင်အနေနဲ့ အစ္စရေးရဲ့ လုံံခြုံရေးလိုအပ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာရုံစိုက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်’’ ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံနှင်ပတ်သက်သော အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများမဖြစ်စေရန် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုသည်။
“ရုရှားတွေက မြောက်ဘက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး မတော်တဆမှုတွေမရှိဘဲ သိမ်မွေ့ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ အခြေအနေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့အရေးကြီးတယ်’’ ဘန်းနက်ကဆိုသည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် အီရန်၏ နျူကလီးယား အစီအစဉ်ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “တိုးတက်လာတဲ့အဆင့် (ဒီအစီအစဉ်) ဟာ အားလုံးအတွက် စိတ်ပူပန်စေပါတယ်’’ ဟု ဘန်းနက်ကဆိုသည်။
၎င်းအနေဖြင့် အစ္စရေးသို့ ပြန်လည်မထွက်ခွါခင် ပူတင်က စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ ၌ ဒုတိယအစည်းအဝေးအတွက် ထပ်မံ ဖိတ်ကြားခဲ့ကြောင်း ဘန်းနက်ကဆိုသည်။ (Xinhua)
JERUSALEM, Oct. 24 (Xinhua) — Israeli Prime Minister Naftali Bennett said Sunday that the five-hour meeting with Russia’s President Vladimir Putin in Sochi was “very good and in-depth.”
Speaking at his weekly cabinet meeting, Bennett said “the relations between Israel and Russia are very good, but it can be better. The potential for economic, scientific, cultural and technological cooperation is endless given the fact that there are approximately one million Russian-speakers in Israel.”
“We reached good and stable conclusions and I found President Putin to be attentive to Israel’s security needs,” he added.
The prime minister said they discussed the situation in Syria and the two countries have been coordinating the airstrikes to avoid clashes.
“The Russians are our neighbors to the north and it is important that we manage the delicate and complex situation there smoothly, without mishaps,” Bennett noted.
The two also discussed the Iranian nuclear program. “The advanced state (of the program) worries everyone,” Bennett said.
Before his departure back to Israel, Bennett said that Putin has invited him forasecond meeting in the city of St. Petersburg. Enditem
Photo-Russian President Vladimir Putin chairsaSecurity Council meeting outside Moscow, Russia, on Aug. 5, 2019.(Sputnik/Handout via Xinhua)